Waxaa soo saareyaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha Style - Shiinaha By Warshadda Style
7 oz dhalo cad oo PET ah oo dhaadheer 68-400 qoorta ah
7oz weel kareemka timo-jarista.Ku soo saar midabo kala duwan sida aad u baahan tahay oo haddii dareerahaagu midab yahay, markaa dhalada PET-ga dabiiciga ah ayaa ugu fiican. Daboolka caagga ah, daboolka aluminium iyo bamka kareemka ayaa la heli karaa. Iyada oo leh Dabeecadda Dabaysha ee Dabaysha Cuntada PET Ma laha sun, wax ur ah, badbaado leh, saaxiibtinimo leh oo si fiican loo shaabadeeyey, si loo ilaaliyo Cuntada Cusub
0.2 oz dhalada PET dahabka ah ee dahabka leh oo leh 32-400 qoorta ayaa dhammaatay
0.2oz Dahabka la qaadan karo kareemka weelka weelka sanduuqa farshaxanka qurxinta qurxinta baakadaha weelasha kaydinta dahabka. Dhalada kala -goynta ku habboon oo wax -ku -oolka ah, sahayda qurxinta maalinlaha ah, ayaa u fududaynaysa safarkaaga, had iyo jeer xafid sawir xarrago leh. Talooyin Diirran: Fadlan ha xirxirin heerkulka sare iyo agabka PH ee sarreeya. Fadlan isticmaal biyo diirran marka aad nadiifinaysid, ha isticmaalin biyo kulul si aad uga hortagto khalkhalka heerkulka sare. dhalada kareemka la isku qurxiyo ee afka laga shaabadeeyey wax qabadkiisu aad buu u wanaagsan yahay, caafimaad qabaa, ammaan yahay oo ma daadan. Yar yar oo fudud oo qaado, oo loo isticmaalo daryeelka maqaarka waxsoosaarka alaabta qurxinta ee subpackage dahabka, ku habboon in la isticmaalo. Agab bakteeriya leh, badbaado iyo bay'ad u fiican, jilicsan oo yar, ayaa mar walba qaata. Weelka ka samaysan PS Polystyrene, daboolka ka samaysan PP Polypropylene.
10 oz dhalada PET hexagon oo cad oo leh 28-400 qoorta ah
Dhalada saabuunta dareeraha ah ee 10oz/300ml waxay ka samaysan tahay wax PET si daahfurnaan iyo dhammaystir wanaagsan loo helo. Weelka saabuunta dareeraha ah waa qaab laba geesle ah, oo ku siinaya waayo -aragnimo dareen wanaagsan iyo saamaynta shaashadda. Garabka 28/400 waxaa lagu qalabeyn karaa bamka buufinta, bamka xumbo, taas oo ku habboon in la qaado oo la isticmaalo. nadiifinta, nadiifinta waraabinta dhirta, baakadaha alaabta daryeelka timaha, iwm. Dhalooyinka caagga ah ee saabuunta dareeraha ah
1.7 oz dabeecadda HDPE dhalada maydhashada wareegsan oo leh 18-410 qoorta dhammaatay
Dhaladayada cad cad ee 100ml ah waxay ka samaysan tahay wax HDPE ah. 100% nooc cusub oo tayo sare leh.Ma laga sameeyay caag, dib loo isticmaali karo, dillaaca u adkaysta oo nabaadayn kara. Naqshadeynta clamshell ayaa aad ugu habboon in la isticmaalo.Aaladda ugu fiican ee daryeelka ciddiyaha iyo qurxinta. .Waxaa la kala dooran karaa cabbirro iyo qaabab kala duwan.Min naqshadeynta, aad loo qaadi karo, aad ugu habboon safarka, boorsooyinka shandadaha iyo ciidaha. Adeegga OEM: Daabacaadda shaashadda xariirta Logo, Calaamadda Waraaqda, Calaamadda caaga ah, duubista. Cabbirka yar ayaa ku habboon socdaalka ama kaydinta iyo abaabulka guriga agtiisa. Si adag loo xirxiray si looga hortago daadinta iyo buuxinta baahiyaha kaydintaada.
0.33 oz 10ml cad PMMA (Acrylic) dhalada buufin caag ah oo leh 20-410 qoorta dhammaatay
Dhaladayada 10ml ee buufiye cad waxay ka samaysan tahay wax PMMA ah. 100% nooc cusub oo tayo sare leh.Waxaa laga sameeyey caag, dib loo isticmaali karo, dildilaaca u adkaysta oo hoos u dhigi kara.ku habboon toner, biyaha nuxurka, iyo biyaha aalkolada.Waxa loo isticmaali karaa qaybinta iyo kaydinta dareeraha badankooda. dhalada buufinta bamka ayaa lagu qaadi karaa diyaaradda, waa la xiraa oo waa la daadin karaa. Celceliska mugga extrusion mar kasta waa 0.13 ml. Buufinta dhalada cadarka ayaa dib loo warshadeyn karaa oo dhibic biyo ah ma dhumin. Adeegga OEM: Daabacaadda shaashadda xariirta Logo, Calaamadda Waraaqda, Calaamadda caagga ah, duubista si fudud loo adeegsado loona nadiifiyo dhaqidda iyo buuxinta. Cabbirka yar ayaa ku habboon socdaalka ama kaydinta iyo abaabulka guriga agtiisa. Si adag loo xirxiray si looga hortago daadinta iyo buuxinta baahiyaha kaydintaada. dhalada buufinta jeebka
Faahfaahinta badeecada Dhalooyinkayaga 2 oz /60ml waxay ka samaysan yihiin maaddo PP si ay u noqoto caagad fiican oo dhammaystiran. isticmaalka
Faahfaahinta badeecadeena 4ml tuubada jel -ka siilka ayaa ka samaysan maaddo PE ah, oo leh xidhitaan iyo dabacsanaan fiican. Tuubadu waa wareegsan tahay. Wuxuu ku siin karaa dareen ka fiican iyo saamaynta muujinta shelf. Markaad isticmaaleysid, tallaabada ugu horreysa waa inaad ka saarto daboolka hore iyo daboolka dambe, tallaabada labaad waa inaad ku toosiso meesha daawada laga soo geliyo siilka ama dabada, tallaabada saddexaadna waa inaad isticmaasho daboolka dheer si aad usha riixitaanka ugu riixdo tuubada si loogu riixo daawada ku jirta tuubada tubada Siilka ama dabada. Waxaa loo isticmaali karaa dawada siilka ...
2 oz dhalo PET hexagon cad oo leh qoorta 24-410
Faahfaahinta badeecada Dhalooyinkayaga 2oz/60ml waxay ka samaysan yihiin maaddada PET si loo rogo dhalo wanaagsan Dhalada ayaa ah qaab laba geesle ah, oo ku siineysa khibrad aad u wanaagsan iyo saamaynta shaashadda. Garabka 24/410 waxaa lagu qalabeyn karaa bamka buufin bamgareynta, taas oo aad ugu habboon in la qaado oo la isticmaalo.Ma loo isticmaali karaa nadiifinta jikada, nadiifinta waraabinta dhirta, baakadaha alaabta daryeelka timaha, iwm.
8.5 oz oo caag ah oo madow oo PVC ah oo leh qoorta 20-400
Faahfaahinta badeecadeena 8.5 oz Dhalada caaga ah ee qoorta dheer qoorta dhalada caaga ah waa baakad caag ah oo loogu talagalay alaabada dareeraha ah. Qaab dhismeedka qoorta dheer, dhalada jirka madow waxay si wax ku ool ah uga hortagi kartaa iftiinka si toos ah dhalada dareeraha ah. dhalada waa siman, taas oo hubinaysa saameyn daabacaad oo wanaagsan, sidaa darteed waxaad u daabici kartaa astaanta alaabtaada si aad u muujiso astaantaada.Waxa loo isticmaali karaa baakadaha dareeraha, saliidda, iwm Codsiga Weelka wuxuu ku habboon yahay noocyo kala duwan. ..